Diving amin'ny Nosy Mimpang, Bali, Indonesia " Journey-Assist - Mandroboka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Diving ao amin'ny Nosy Mimpang
Dive site. Nosy Mimpang (Gili Mimpang)
Mimpang (Gili Mimpang, na Gili Mimpang). antsitrika
Mimpang dia nosy iray hafa any akaikin'i Bali. Misy vato maromaro izay rakotra ahitra sy kirihitra. Any akaikin'i Mimpang dia misy vatohara izay onenan'ireo zavaboary an-dranomasina maro. Mimpang dia mahaliana indrindra amin'ny maha-tranonkala antsitrika azy.
Ny hany zavatra tokony hatao eto dia ny antsitrika. Amin'ny lafiny avaratra sy atsimo, ny Mimpang dia voasasa amin'ny alàlan'ny rano Lombok, izay mitondra fiainana anaty rano maro isan-karazany mankany amin'ny morony. Avy any atsimo dia midina mitsangana anaty rano ny vatohara. Avy any avaratra dia malefaka ilay fidinana. Ny rindrin'ny haran-dranomasina dia misy lava-bato maromaro ao anaty rano onenan'ireo polyps, moluska ary trondro kely.
Mampiavaka ny tranokala
Mangarahara - hatramin'ny 30 m.
Ny hafanan'ny rano - manomboka amin'ny +18 ka hatramin'ny +20.
Matanjaka ny ankamaroan'ny ankehitriny ary matanjaka be matetika.
Ilay vatobe anaty rano sy lembalemba kely amin'ny faritra voalohany dia rakotra vatohara. Anisan'ireny ny sady malefaka no mafy. Misy fanambanin'ny fasika any amin'ny 25 m ny halaliny. Ny antsantsa fotsy amoron-dranomasina dia matetika no hita eto. Izy ireo dia azo antsoina hoe "manintona" lehibe ao amin'ity tranonkala antsitrika ity. Indraindray ny antsantsa tigra dia milomano amin'ity toerana ity. Eo akaikin'i Mimpang koa dia misy trondro masoandro, ny halavany dia mahatratra 3 m. Ary koa, eto ianao dia afaka mahita trondro lolo, trondro napoleon, eels, cuttlefish, squid ary karazan-dranomasina maro hafa.
Mahery ny fihetsiky ny rano eo akaikin'ny vatolampy. Indraindray misy tadion-tadio mampidi-doza amin'ny toerana. Noho io antony io dia tsy azo idirana antsitrika ilay tranonkala.
Mimpang Island dia eo akaikin'ny morontsiraky ny tanànan'i Chandidas
Nosy Mimpang - Faritra Candidasa
adiresy: Gili Mimpang 80851, Candidasa, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.524787, 115.576466
Misitrika amin'ny Nosy Mimpang
Misitrika amin'ny Nosy Mimpang. Tontolon'ny Undersea
Nosy Mimpang eo amin'ny sari-tany
Nosy Mimpang amin'ny sari-tanin'i Bali